ဆယ်ကျော်သက်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး (ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိစေဖို့၊ အပိုင်း - 4) | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဆယ်ကျော်သက်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး (ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိစေဖို့၊ အပိုင်း - 4)
- ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်သလဲ?
- တကယ်လို့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို အလေးမထားရင် ဘယ်လိုရောဂါတွေဝင်ရောက်နိုင်သလဲ?
သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးစိုးလွင်၊ ဒေါက်တာ အေးချမ်းမိုး နဲ့ ဒေါက်တာ ထက်ထက်အောင်တို့ကနေပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးက ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို အများပြည်သူများ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် အပြည့်အစုံဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။